musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » COVID-19 denda rinokanganisa simba remapasipoti ekutanga
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kunyangwe paine kumwe kufambira mberi kwakaitwa, pakati paNdira kusvika Kurume 2021, kufamba kwepasi rose kwainge kwadzoreredzwa kungori 12% yematanho epamberi pechirwere panguva imwechete iyi mu2019, uye mukaha uri pakati peyedzidziso uye chaiyo yekufambisa kuwana inopihwa kunyange nemapasipoti epamusoro-soro. inoramba ichikosha.
Kudonhedza UK uye US pasipoti simba pane-yenguva-yakaderera.
Isolateism uye nyika inovhara nzira yekumutsiridza kwehupfumi.
Mune post-COVID yenyika, ugari hunokosha kupfuura nakare kose.
Sezvo nyika iri kukwikwidza kudzoka kubva pamhedzisiro yehutano hwepasi rose hwekukurumidzira, mibvunzo inokurumidza kutenderera nekufamba kwenyika inoramba ichiripo: Kudzoka kumatanho epamberi pehosha kunogoneka here? Zvichazadziswa sei? Uye ndiani achasara shure? Mhedzisiro yazvino uye kutsvagisa kubva pachinzvimbo chekutanga chemapasipoti epasirese zvichienderana nenhamba yenzvimbo dzavanogona kuwana vasina vhiza yekutanga - ratidza kuti kunyange paine chikonzero chekutarisira, chinofanirwa kuve chakadzikiswa neicho chokwadi chekuti kuyambuka muganho inoramba ichinyanya kuvharirwa. Kunyangwe kumwe kufambira mberi kwaitwa, pakati paNdira kusvika Kurume 2021, kufamba kwepasi rose kwainge kwadzoreredzwa kungori 12% yematanho epamberi penjodzi panguva imwechete iyi mu2019, uye mukaha uri pakati peyedzidziso uye chaiyo yekufambisa kuwana inopihwa kunyange nemapasipoti epamusoro-soro. inoramba ichikosha.
Nekunonoka Tokyo 2020 Olimpiki kwasara mavhiki mashoma, uye nyika iri mune 'quasi' mamiriro ekukurumidzira, Japan zvakadaro inoramba yakabata panzvimbo yekutanga pane iyo Henley Passport Index - iyo yakavakirwa pane yakasarudzika dhata kubva ku International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) - ine theoretical visa-yemahara / visa-pane-yekuuya mamaki e193.
Nepo kutonga kwemapasipoti eEuropean muTumi Gumi kwave kupihwa kune yakawanda yenhoroondo yegore regumi nenhanhatu, kukwirira kwenzvimbo nhatu dzeAsia - Japan, Singapore, neSouth Korea - chave chinhu chitsva. Singapore inoramba iri mu16nd nzvimbo, ine vhiza-yemahara / vhiza-yekusvika-mamaki e192, uye South Korea inoenderera ichigovana mubatanidzwa-3rd nzvimbo neGerman, imwe neimwe iine zvibodzwa gumi neshanu.
Nekudaro, kana ichienzaniswa neicho chaicho chekufambisa chinowanikwa parizvino kunyangwe kune vane mapasipoti ekumusoro-soro, pikicha inotaridzika zvakasiyana zvakanyanya: varidzi vemapasipoti eJapan vanokwanisa kuwana mashoma kupfuura makumi masere nzvimbo (yakaenzana nesimba repasipoti reSaudi Arabia, rinogara nzira pasi muna 80st nzvimbo mune chinzvimbo) nepo varidzi veSingapore pasipoti vanokwanisa kuwana mashoma pane makumi manomwe enzvimbo (yakaenzana nesimba repasipoti reKazakhstan, rinogara mu75th nzvimbo).
Kudonhedza UK uye US pasipoti simba pane-yenguva-yakaderera
Kune maonero akafanana ekusuwa kunyangwe mune nyika dzakabudirira zvakanyanya kudzivirirwa kwekudzivirira Covid-19: UK neUS parizvino vanogovana vakabatana-7th nzvimbo pane indekisi, zvichitevera kudzikira kwakadzikama kubvira pavakabata chinzvimbo chepamusoro muna 2014, nevabati vemapasipoti avo vanokwanisa kuwana 187 nzvimbo dzepasirese. Pasi pekurambidzwa kwekufamba parizvino, zvakadaro, varidzi vepasipoti yeUK vakatambura kudonha kunoshamisa kweanopfuura makumi manomwe muzana murusununguko rwavo rwekufamba, parizvino vachikwanisa kuwana zvishoma kupfuura makumi matanhatu nzvimbo pasi rose - simba repasipoti rakaenzana nereUzbekistan pane indekisi. Vapasipoti veUnited States vakaona kuderera kwe70% murusununguko rwavo rwekufamba, vachikwanisa kusvika 60 chete pasirese - pasipoti simba rakaenzana neRwanda pane iyo Henley Passport Index.
Hazvizivikanwe kuti marambidzo ekufamba acharamba aripo sei, asi zvinoita sezviri pachena kuti kufamba kwepasirese kuchadzvanyirirwa zvakanyanya muna2021 zvirinani. Munyika zhinji, kusahadzika kwakakomba kwakamuka pamusoro pekugona kugadzirisa dambudziko repasirese, nekutambira kunotevera kwezvakanyanya kutaridzika mukati. Kuwedzera kuzvitsaura uye kudzora nyika pasina mubvunzo zvichave nemhedzisiro, pakati pazvo kuwedzera kukuvadzwa kwehupfumi hwenyika, kudzikiswa kukuru kwekufamba kwepasirese, uye kurambidzwa parusununguko rwevanhu kuita sarudzo dzakanakisa dzemhuri dzavo nemabhizinesi avo. Zviripachena kuti kupfuura nakare kose, vanhu vanofanirwa kuwedzera kwavo kwekugara uye pasipoti sarudzo.